Nezvedu | Hebei Lihua Mishonga Co, Ltd.
Hebei Lihua Pharmaceutical Co., Ltd.iri yepamusorosoro zvebhizimisi kushandisa kukura, kugadzirwa, rokutengesa uye michina mabasa mhuka mhuka, pamwe vakanyorwa guta mamiriyoni 80 Currencykuva. Nenhumwa ye "Makore Mazana Hupenyu ehupenyu, Yakasimba Kuchengeta Mhuka uye Kubudirira Kwekurima", kambani yakazvipira kuve mudzimba wekutanga-kirasi yepasi rose kurapa kwemhuka chigadzirwa mupi zvinoenderana nehunyanzvi uye matarenda.
Iyo kambani yakavambwa muShijiazhuang Nanwu Women Development Zone muna 2003. Muna 2004, yaiverengerwa se "Star Enterprise yeVeterinary Medicine Production Scale" muShijiazhuang Guta. Muna 2005, yakanga yavose sezvavakatarirwa se "Hebei Provincial Science uye Technology Enterprise" uye "National Star Promoting Project Key Promotion Product Enterprise" "Muna 2006, yakanga yavose sezvavakatarirwa sezvo" simba kupfuura mhuka wemhuka muchiso mu China ari wemhuka mushonga indasitiri "neChina Animal Health Association, uye muna 2007 yakapihwa zita se "Top 20 Veterinary Medicine Enterprises muProvince yeHebei" neHebei Animal Health Products Association. Muna 2008, isu takakumbira 35.5 muvhu muXinle Airport Industrial Park, Shijiazhuang Guta, uye takavaka nyowani yekugadzira base, nekudaro tichipinda nhanho nyowani. Muna 2010, 4 kugadzirwa okudhindira uye 7 yekugadzira mitsara yekambani nyowani nyowani yakapasa yenyika GMP kuongorora panguva imwe, uye zviri pamutemo yakatanga kushanda uye kuisa mukugadzirwa. Mugore rimwe chetero, yakanzi "Yepamusoro Gumi Yakakosha Investment Yekusimudzira Units" neXinle City. Muna 2011, kambani yakapihwa zviri pamutemo "Teaching Practice Base" neHuazhong Agricultural University. Kushanda-bhizinesi kushandira pamwe kwakavandudzwa. Muna 2012, kuitira kuti tikudziridze musika wepasi rese, takaupfuudza kamwe. ISO9001, ISO22000 yepasi rose mhando system chitupa. Muna 2013, kambani yakawedzera ketani yayo yekumaindasitiri uye ikave nechekuita mumunda weacaculture. Zano rakazara reiyo zana nemakumi maviri ezviuru zvehupenyu hwenguruve purazi purojekiti yakabvumidzwa kuvakwa. Chikamu chekutanga cheprojekti chinofukidza nzvimbo inopfuura mazana matatu maeka. Parizvino, inoshanda nemazvo uye ndiyo purojekiti yakakura kwazvo yemvura muXinle. Muna 2015, kugadzirira kwekuvakwa kwemusangano mutsva kwakatanga, ichiwedzera mitsara yekugadzira mahwendefa, granules, majekiseni asingagadzirisike, nezvimwewo, kugadzirira kusimudzira musika wepasi rose. Kubva pakagadzwa kambani iyi, kuburikidza nekuvandudzwa kweacaculture, chikafu uye kubatanidzwa uye kuwanikwa, zvishoma nezvishoma yakawana kusiana kwakakurumidza mumunda wezvekurima zvazvino. Muna 2016, kambani iri paakavapa musoro "Key Shijiazhuang Agricultural Industrialization Zvinotungamirira Enterprise". Muna Ndira 2017, iyo nyowani yekugadzira tambo yemapiritsi, granules uye asiri ekupedzisira majekiseni akapfuudza kugamuchirwa kweGMP uye ISO, ndokutanga kushanda nekugadzira. Yakarongwa segore rimwe chete. "Hebei Sayenzi neTekinoroji maSME". Mu2018, yakapihwa "Hebei Industrial Enterprise R&D Institution" uye "High-tech Enterprise". Pakutanga kwa2019, yaiverengerwa se "Key Leading Enterprise yeProvince yeHebei" uye "Hebei Sayenzi neTekinoroji Huru Huru Bhizinesi". Iyo kambani inonyatso tenda kuti musimboti tekinoroji ndiyo yekutanga kugadzirwa!
Iyo kambani parizvino ine vashandi makumi maviri nevaviri, uye koreji dzidzo uye pamusoro account ye80% yekambani yakazara.
Parizvino, kutengeswa kwechigadzirwa chemumba kunopurudzira anopfuura matunhu makumi maviri, uye kunoshandira mapoka makuru nemapurazi madiki nepakati.
zvigadzirwa zvaro zvinotumirwa kunyika gumi neshanu (Ethelbia, Sudan, Pakistan, Myanmar, Cameroon, Chad, nezvimwewo).
Iyo kambani parizvino ine vashandi makumi maviri nevaviri, uye koreji dzidzo uye pamusoro account ye80% yekambani yakazara. Panyaya yekutsvagisa nekusimudzira, kambani parizvino iri kubatana nemayunivhesiti uye vadzidzisi vakaita seHuazhong Agricultural University uye Wuhan University yeChiedza Viwanda. Iko kune mana-epasi rose madhiragi matsva ari kuziviswa, uye zvitanhatu zvigadzirwa zvepatent uye zvitatu zvekugadzira patent nzira dzekugadzirira dzawanikwa. Panguva imwecheteyo, inotsigira R&D nzvimbo uye inodzora yemhando yepamusoro uye yepamusoro yekutarisa nzvimbo ichavakwa kuti ipe simba mukusimudzira uye nekukurumidza kukura kwekambani.
Parizvino, kutengeswa kwechigadzirwa chemumba kunodarika anopfuura matunhu makumi maviri, uye kunoshumira mapoka makuru (COFCO, Yangxiang, Luo Niushan, Tangrenshen, Yurun, Xiangda, nezvimwewo) nemapurazi madiki nepakati. Muna 2017 na 2018, vakapfuura Ethiopia, Kugamuchirwa kweSudan International GMP kunovhura musika wekunze weLihua, uye zvigadzirwa zvawo zvinotumirwa kunyika gumi neshanu (Ethelbia, Sudan, Pakistan, Myanmar, Cameroon, Chad, nezvimwewo).
Iyo kambani yakavakirwa pane yakajairika pfungwa, nemweya wekusimudzira kumberi uye kutsvaga kugona, mhando yekurapa vanhu nekutendeseka uye nekushingaira basa, nevanhu vane pfungwa uye nevanhu vane pfungwa mupfungwa; kubva mukusimudzira-kwenguva refu kwebasa, ine tarenda rekuona. Kubudikidza nesumo, kurima nekusimudzira matarenda akanakisa, uye kuburikidza nemhando yepamusoro yezvigadzirwa nemasevhisi ekupa zvipo zvakanaka mukusimudzira indasitiri yekuchengeta zvipfuyo yeChina, Hebei Lihua Pharmaceutical ichazadzisa kuzvipira kwayo muzana ramakore rechi21 mishonga yemhuka uye mhuka yekuchengeta mhuka , uye anga achiedza zvisingaite Shanda nesimba!
Musangano wekugadzira unonyatso kushandisa zvinodiwa neGMP manejimendi uye inoda mushandi wese kubva pane zvese zvese kuti aone kuti mhando yekugadzira haisi diki nyaya. Chete manejimendi manejimendi uye akaenzana manejimendi anogona kuburitsa zvigadzirwa zvakanaka, zvinova izvo zvatinowanzo taura, pane zvinowirirana mupfungwa, Ehe, ita mushonga.
Kambani yedu yakavakirwa pasainzi uye tekinoroji uye matarenda, uye yakazvipira mukugadzira iyo nyowani mhando ine Lihua hunhu. Kuti uwane zvinodikanwa zvakasiyana zvezvigadzirwa zvemishonga yezvipfuyo mumisika pasirese, Lihua Pharmaceutical inosimbirira pakamira pakakwirira peindasitiri, inosvitsa nyanzvi zhinji semusana wekutsvagisa nekusimudzira kwaLihua, uye inoshanda pamwe nehunyanzvi hwepamusoro uye marabhoritari. muindastiri kusimudzira kusimudzira kwekutsvaga kwezvinodhaka nekusimudzira. . Kambani yedu inoomerera kumweya wehungwaru uye inotarisa mukugadzira zvigadzirwa. Zvitanhatu zviripo zvigadzirwa zvakahwina nyika yekushandisa modhi patent uye zvitatu zvigadzirwa zvine akahwina nyika yekugadzira patents , Kutungamira iyo indasitiri maitiro. Panguva imwecheteyo, iri kuzivisa nyika-chikamu chitsva chinodhaka uye kuvaka zita reLihua. Isu tinotenda zvakasimba kuti kunonoka kushanda uye kushanda nesimba, hunyanzvi uye mhando!
Kero: Shijiazhuang Xinle Airport Industrial Park